Coronavirus Voa ihany koa i Tsiroanomandidy
Niampy 15 ireo mararin'ny eto amintsika, izay hita tamin’ny fitiliana 201 natao, ka nampiakatra ny isa ho 542 hatramin’ny omaly. Filitiliana 164 no nataon’ny IPM teto Antananarivo, ka nahitana tranga 6 avy any Toamasina, 2 avy eto Antananarivo,
1 avy any Tsiroanomandidy ao anatin’ny faritra Bongolava, 1 avy any Moramanga. 37 ny fitiliana natao tany Toamasina, ka 5 tamin’ireo no voa. Raha haravona izany dia 11 Toamasina, 2 teo Antananarivo, 1 t, 1 Moramanga. Nisy 5 vaovao sitrana izay 4 teny amin’ny Hopitaly Befelatanana ary 1 tany Tsiroanomandidy, 1 Fianarantsaoa, ka 147 izy ireo hatreto. 393 no mbola manaraka fitsaboana. 6 ny "formes graves" na ireo tena atahorana. Taorian’I Tolagnaro sy Toliara, dia I Tsiroanomandidy izany izao no tanàna vaovao nahitana trangana covid-19. Nanomboka ny 19 martsa hatramin’ny 23 mey, dia miisa 9114 ny fitiliana vita ho an’i Madagasikara, izay ambany dia ambany tokoa raha ampitahaina amin’ny firenena maro aty Afrika. I Rwanda, ohatra, dia 58 477, Afrika Atsimo, Zambie 20 011, Djibouti 23 140, Maorisy 102 247, La Réunion 17 200,…